रेडपाण्डाको छाला सहीत सल्यानका दुर्इ व्यक्ति दाङमा पक्राउ
फागुन २ सल्यान ।
सल्यानका दुर्इ व्यक्ति रेडपाण्डाको छाला सहीत दाङमा पक्राउ परेका छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३ टा्ड्के निवासी ३६ वर्षीय टोपबहादुर वली र कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी ५१ वर्षीय रुपलाल बोहरालाई दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छाला पक्राउ गरेको छ । पाँच नम्बर प्रदेश अन्तरगतको अनुसन्धान ब्युरोले इप्रका तुलसिपुरसंग समन्वय गरेर तुलसिपुरको वेलुवावाट रेडपान्डाको छालासहीत दुई जनालाई पक्राउ गरेको हाे ।
प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले गोप्य सुचनाको आधारमा घरमा लुकिछिपि बसेको अवस्थामा छापा हान्दा दुर्लभ रेडपाण्डाकाे छाला वेचविखन गर्न लागेको समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ वेलुवा वाट प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिएका छन्
डिएसपी सापकोटाका अनुसार पक्राउ परेको छालासहीत दुई जनालाई प्रतिवन्धित वन्यजन्तु ओसारपसार ऐन अनुसार कारवाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय दाङमा बुझाइने छ । यो मुद्धा ठहर भएमा उनिहरुलाई कम्तिमा पाच वर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुने इप्रका तुलसिपुरले जनाएको छ ।